माधव नेपाललाई गुरु भट्टराईले किन दिए खुलेआम धम्की, माकुनेलाई मैदानमा हिसाब किताब गर्छु - Babal Khabar
रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरुप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय सार्वजनिक भएपछि फेसबुकमार्फत आक्रोस व्यक्त गरेका छन्। बुधबार भट्टराईले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालको नाम लिएर असन्तुष्ट जनाएका हुन्।
उनले आफूलाई स्पष्टीकरण लिन र पदबाट बर्खास्त गर्न मुख्य रुपमा प्रचण्ड र माधव नेपालको भीषण दवाब रहेको दाबी गरेका छन्। ‘मलाइ स्पष्टीकरण लिन र पदबाट बर्खास्त गर्न मुख्य रुपमा प्रचण्ड र माधव नेपालको भीषण दवाब रहेछ।’ उनले भनेका छन् , ‘गुरु भट्टराई देखेर तीन कान्ला हाम्फानेहरुले यो देश बनाउँछन् भनेर कल्पना गर्नु? म लाखौंको जागिर छोडेर ५० हजारको जागिर खान बाध्यताले आएको हो। त्यो बाध्यता मुलुक निर्माण र जनताको खुसियालीको निम्ति हो। मेरो आफ्नै व्यक्तिगत चाहना हैन।
भट्टराईले गरीबका छोराछोरीलाई कामना लगाएको दाबी गरेका
छन्। ‘मलाइ निकाल तर मैले नियुक्त गरेका गरिब नागरिकका छोराछोरीलाई हिम्मत गर्यो भने तिम्रो सत्ता हल्लिन्छ, मजाक नगर।’ उनले भनेका छन्, ‘गरीबका छोराछोरीलाई कामना लगाएको छु। भारतीय कम्पनिलाई दिनु पर्ने ८ करोड आजै पठाउँदै छु र ट्रायल रन गर्दैछु।
माकुनेसँग मैदानमा भेट्ने हो। उनले लोकतन्त्रको पक्षमा बोल्दा मेरो आचरण खराब भो? भन्दै प्रश्न गरेका छन्। उनले लेखेका छन्, ‘मैले त घोषित रुपमा भनेको हुँ, माधव नेपाल कहाँबाट चुनाव लड्छन, २ महिना म त्यहि बिताउने वाला छु। मसँग जोरी खोज्ने माकुनेलाई मैदानमा हिसाब किताब गर्छु। त्यसपछि विपक्षि दलको सरकार बनाउँन हिड्ने यस्ता अराजनितिक मान्छे कहाँ पुग्छन प्रष्ट छ। म त घोषित रुपमा भन्दैछु – माकुने राजनीतिके क्यानसर हो, काटेर फाल्न आवश्यक छ।
साभार : सुदर्शन खबर
Prevसरकारले वैकल्पिक बाटो दिए प्राधिकरण छाड्न तयार : हितेन्द्रदेव शाक्य
nextउहिलै यसरी पर्थ्यो लभ – भैरव रिसालको रमाइलो कुरा सब चकित